Radanoara Julien : “Mandray ny fiaraha-mitantana ny filoha raha tena demokraty” | NewsMada
Radanoara Julien : “Mandray ny fiaraha-mitantana ny filoha raha tena demokraty”
Naneho ny heviny manoloana ny raharaham-pirenena ny avy amin’ny Herin’ny fanovana, Radanoara Julien. Anisan’ny noresahiny ny momba ny fiaraha-mitantana.
“Tolo-tanana no hatao amin’ny filohan’ny Repoblika. Iza no tsy mahita fa tsy mandeha izao raharaham-pirenena izao? Mahatsapa an’izany izy: raha tena demokraty, mandray an’izay tolo-tanana izay.“
Io ny fanehoan-kevitry ny avy amin’ny Herin’ny fanovana, Radanoara Julien, momba ny fiaraha-mitantana takin’izy ireo alohan’ny hanatanterahana fifidianana amin’ny 2018. Am-pilaminana no hitondrana ny fiaraha-mitantana, hametrahana ny fepetra tsara rehetra ho amin’ny fifidianana madio, mangarahara, eken’ny rehetra.
Hiara-midinika amin’ny tolo-tanana izay fiaraha-mitantana izay, hamaritana ny fahefan’ny filohan’ny Repoblika sy ny governemanta mba hisian’ny tetezamita milamina. Raha tena demokraty ny filohan’ny Repoblika, araka ny fanazavany: mahafantatra tsara fa tsy vitany samy irery intsony izao raharaha rehetra eto Madagasikara izao. Porofon’izany, ny tsy fandriampahalemana isan’andro na aiza na aiza. Efa tsy mahavita tanteraka ny fitondrana amin’izao fotoana izao.
Mila haato avokoa ny andrimpanjakana rehetra
Amin’ny volavolam-pifanarahana no hamaritana izay tena andraikitry ny filohan’ny Repoblika amin’ny fiaraha-mitantana. Eo koa ny andraikitry ny governemanta hatsangana, satria tokony ho avy amin’ny Herin’ny fanovana ny Praiminisitra. Fiaraha-mitantana izany na tsy mitovy fijery aza, fa milamina mankany amin’ny fifidianana 2018.
Inona ny tena hapetraka amin’ny fiaraha-mitantana? Miato avokoa aloha ny andrimpanjakana rehetra, satria zavatra hafa no hapetraka eo: komity nasionaly ho fanavotam-pirenena. Hatao am-pitoniana izany mba tsy hisian’ny korontana sy simba, fa mba mitohy ihany na ny lafiny toekarena aza, ohatra.